DOHA (Reuters) - Mudhara Roberto Firmino akabata mukombe wechinguva akamira apo Liverpool yakarova Monterrey yeMexico 2-1 neChitatu kuti isvike mumutambo weClass World Cup, uko vachatamba neFlamengo yeBrazil.
Liverpool, isina centre back Virgil van Dijk, uyo aive arasika kuburikidza nehurwere uye naFirmino naSadio Mane kutanga pabhenji, havana kuzombozvisungirira pamutambo asi tsika yavo yekushingirira yakabhadhara uye vakawana nzvimbo muna Mugovera wekupedzisira.
"Vakarwa zvakaomarara, takanga tine matambudziko pamberi pemutambo uye panguva yemutambo zvakare asi ini ndinofunga kuti vakomana vakaita zvakanaka," akadaro maneja weLiverpool, Juergen Klopp.
Kwaive kuguma kwehutsinye kunyangwe kuna Monterrey uyo akatamba nechirango pamwe nekupenya paye-kurwisa-uye aigona kuve akanakidzwa husiku hwakakurumbira dai zvisiri zvekuyambira kweMutambi weLiverpool Alisson Becker.
NaDejan Lovren naJoel Matip vakakuvara, Klopp aifanira kubvunza mutambi Jordan Henderson kuti azorodze Van Dijk pamwe naJoe Gomez pakati penzvimbo yekudzivirira.
Paivawo nekutanga kwaXherdan Shaqiri naDivock Origi mukurwiswa, Klopp paakatanga nehutatu hweyemugariro wake wekurwiswa pabhenji, kufungidzira achifunga nezve Mugovera wekupedzisira.
Liverpool yakatanga kusvika chaipo pavakatora maminitsi gumi nemaviri ekutungamira apo Mohamed Salah akapatsanura dziviriro yeMonterrey nepassay reverse yakapfuura iyo Naby Keita akamhanyira kwaari achivimba nekutsvedza kumba.
Iyo yekutungamira, zvisinei, yakangotora maminetsi maviri chete sekudzivirirwa kweLiverpool kutadza kunyatsoita nebhola rakakwira mubhokisi. Kurovera kubva kuna Jesu Gallardo kwakavharwa, asi bhora rakawira kuna Rogelio Anonakidza Mori uyo akadzinga kumba kuti aite 1-1.
Liverpool yaAlisson Becker ndiye aive nemubhadharo wevaridzi vaviri vetsiva, achivhiringidza kaviri murwi weColombian akahwina Dorlan Pabon nguva isati yasvika.
Pabon yakaitazve kutyisidzira mushure mekupindirana na Becker pazere kuti asarudze kutapira kwake-kwakasununguka uye muchengeti wemuBrazil akaitawo zvakare nerurefu rurefu kubva kuna Funes Mori.
Asi nemutambo unoenda kune imwe nguva, Firmino, uyo akauya nemaminetsi makumi masere neshanu, akagadzirisa kusangana.
Iye weBrazil akatendeuka muchinjiso chakaderera kubva kuna Trent Alexander-Arnold padhuze nepamberi, mushure mebasa rakanaka kubva kuna Salah, uyo akaramba akabata bhora ari mupenyu asati adzosa iro chairo mumutambo.
Kwaive kuguma kweutsinye kweMonterrey anonakidza uyo murairidzi wake Antonio Mohamed akanzwa kuti vaive vakodzera zvimwe.
"Isu taifanirwa kuwana mubairo wakanaka, takakudza nhabvu yeMexico. Taikwikwidza kuhwina asi isu takarasikirwa mumaminetsi ekupedzisira uye vakabvuma, ”akadaro.
"Ndinodada nemabatiro atakaremekedza dhorobha nenyika - takarasikirwa neruremekedzo nerukudzo uye takatarisira mukombe weMexico."
Monterrey anotarisana nemakumbo maviri-maviri-maviri Liga MX playoff ekupedzisira pakatarisana neClub America musi waZvita 26 na29.
Mugovera wekupedzisira uchave wekudzokorora kwe1981 Intercontinental Cup, mutungamiriri wekutanga, apo Zico yakafuridzira Flamengo ichirova Liverpool 3-0 kuTokyo.